Semalt Expert: Toro-làlana hanalavirana ny hosoka amin'ny aterineto
Ny fitomboana sy ny fampidirana ny Internet amin'ny fandraharahana sy ny fiaraha-monina dia tsara syzava-dratsy. Etsy andaniny, ny tombontsoa maro ananan'ny Internet dia toy ny E-varotra. Ary ny tena ratsy dia zava-mampahonena tokoatoy ny cyber-crime.
Anisan'ny ahiahy manahirana indrindra ny hosoka amin'ny aterineto - flanellen stoffen online. Misy hosoka amin'ny Internet rehefa misyny olona dia mampiasa ny aterineto amin'ny raharaha famotehana mikendry ny hahazo tombony tsy marina amin'ny olon-kafa. Matetika, ny antony manosika ny lehibe indrindraNy fidiran'ny aterineto dia tombony ara-bola.
Misy karazana hosoka amin'ny aterineto marobe, fa ny sasany dia matetika novonoinanoho ny hafa.
iray amin'ireo manam-pahaizana matihanina indrindra Semalt ,Andrew Dyhan, mamaritra ireto karazana hosoka amin'ny aterineto manaraka ireto:
1. Fanangonam-bola sy fananana sandoka
Ireo tompon-tsoa amin'ny varotra sandoka dia mifantoka amin'ny mpanjifa ny varotra an-tserasera an-tserasera. TheNy mpanao heloka bevava dia handefa vokatra iray ao amin'ny tranokalam-pivarotana iray mampiseho fa mivarotra azy io amin'ny mpihira ambony indrindra. Mety ho ny vokatraTsy misy na tsy misy izy io, tsy mitovy amin'izay ambadika. Ny scammer dia miezaka ny hahazo ny mpihazakazaka mandresy handefasana fenoFa ny vokatra alohan'ny fandefasana dia vita. Farany, ny mpanao heloka bevava dia tsy mandefa ny vokatra amin'ny mpividy (izay antsoina hoe tsy fandefasanany entana), na ny vokatra izay nalefa dia zavatra hafa, matetika no tena lafo kokoa noho ny vidin'ny entana voavidy.
2. Spams sy Identity Thieves
Mamoaka ny mailaka indraindray ny mpanendaka hanafoana ireo mpiserasera amin'ny aterineto naManimba ny fitaovana ampiasain'izy ireo. Ny sasany amin'ireo mailaka misafotofoto dia mitady hanery ny iray hamoaka ny mombamomba azy manokana sy ara-bola,ary ny hafa dia mandeha lavitra kokoa amin'ny famahanana ny olona amin'ny fandefasana vola amin'ny tetika mampiahiahy.
Ireo mailaka mampidi-doza dia hitsikera ao anaty mailakao ho toy ny fampandrenesana ho an'ny liana ambanyfampindramam-bola, fialam-boly mikatsaka famatsiam-bola, fandrobana mahatsiravina, ary olana mifandraika amin'ny fiainana. Hanana rohy izay heverinao ho izy ireotsindrio raha te hahazo izay lazain'ny mpampihorohoro. Miaraka amin'ny tsindry iray monja amin'ny rohy, dia mety hampiseho ny loza mety hitranga aminao ianaony ordinateranao na ny fitaovana finday nalaina tamin'ny viriosy, manambara amin'ny olona tsy fantatra ny tenimiafinao, ny fampahalalana momba ny carte de crédit, ny antsipirihan'ny fiarovana ara sosialy,adiresy sy nomeraon-telefaona.
Matetika mifamatotra amin'ny fangalarana ny maha-olona ny spams satria mety ho, ary matetika izy ireo no ampiasainany fahazoana ny mombamomba azy manokana izay ampiasaina amin'ny tanjona maro, anisan'izany ny fisehoana..Ny antsipirian'ny tsipika nofantsihana dia azo ampiasaina hanoloana ny hafakarazana hosoka amin'ny aterineto toy ny fangatahana na fivarotana hosoka.
3. Vola karta amin'ny Card
Ny hosoka amin'ny carte de crédit dia mitandrina indrindra amin'ny olona tsy mitandrina tsara rehefa mampiasa azycarte de crédit. Ny olon-kafa dia voatsikera amin'ny alàlan'ny fitsaboana malaza amin'ny famonoan-tena.
Ity karazana hosoka amin'ny aterineto ity dia manomboka rehefa manome ny antsipiriany amin'ny carte de crédit iray ao amin'ny aduplicitous website. Ireo mpanao heloka bevava dia hampiasa izany fampahalalam-baovao izany na hanao fampindramam-bola na famenoana mampiasa ny carte de crédit.
Ny fampiasana hosoka fampiasam-bola dia manaparitaka amin'ny alàlan'ny tetikasa fampiasam-bola saro-pady ary mikendry azymanambaka mpampiasa vola na mangalatra ny maha-izy azy. Ny fahatahorana dia tonga amin'ny endriky ny boaty an-tserasera, ny gazetiboky amin'ny vidiny, naendrika hafa momba ny fampahalalam-baovao izay manome vaovao diso. Rehefa misy mpampiasa vola marobe no mianjera noho ny tranga, ny soatoavinadia novaina ary ny mpanao heloka bevava avy eo dia mivarotra ny tahiriny avy amin'ny toerana mahasoa.
Ny endrika hafa amin'ny hosoka amin'ny aterineto dia ahitana tranonkala tsy mendri-piderana sy famandrihana fandoavam-bola.
Ireo tranonkala tsy mendri-kaja dia mety hanimba ireo tranonkala sy ireo mpitsikilo mahayfifanakalozan-kevitra sy fifanakalozan-kevitra toy ny hoe izy ireo no tena fifanarahana. Mihabetsaka ny fandaharanasam-bola mialoha amin'ny raharaham-barotra amin'izao fotoana izao. Azonao fantarinaIo karazana tranga io dia mora. Raha toa ny mpivarotra iray manindry ny manangom-bola ary manantena ny hamerina ilay vola, dia tena avo lenta izanyAzo inoana fa fanesorana. Mora azo atao amin'ny alàlan'ny varotra an-tserasera, indrindra indrindra.
Tokony hohavaozina foana ny olona amin'ny fampiasana ny Internet ho an'ny mpanohitraheloka bevava amin'ny fotoana rehetra. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy:
Mitandrema fa azo atao ny mividy tranokalam-pifaneraserana izay azo ampiasaina.
Ny fampiasana fidiram-bola azo antoka sy voaaro
Aza mitsidika rohy rehetra alefa amin'ny alàlan'ny mailaka alohan'ny hanamarinana fa ny loharanony mailaka dia azo itokisana.
Aza avela hampiasaina tsy ho eo imasonao ny carte de crédit
Mitandrema tsara rehefa manao raharaham-barotra lehibe na mamaly ny tolotra natao an-tserasera.
Mijere foana ny vola raisinao mba hahazoana antoka fa marina avokoa ny isa
TSY MAIKA manoratra ny solaitrao amin'ny karatra misy anao na aiza na aiza.
Asaivo manafoana ny karatra raha toa ka mamafa izany ianao.
Mijere foana mba hahazoana antoka ny tranonkala tianao hampiasa ny anao manokana syNy angon-drakitra ara-bola dia manana URL iray atomboka amin'ny https: //.